व्यवसायमा सफल बन्न थाहा पाउनुपर्ने टिप्स – PanchKhal Online
Home/रोचक/व्यवसायमा सफल बन्न थाहा पाउनुपर्ने टिप्स
के तपाईं कुनै व्यवसायको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ ? अनि तपाईं व्यवसायमा सफलता चाहानुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईंले बास्तुलाई ध्यानमा राखेर ब्यवसायको सुरुवात गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंको व्यवसाय सफल हुन्छ ।
बास्तुशास्त्रीहरुका अनुसार, कुनैपनि घर तथा कार्यालयको वास्तु दोष निवारण गर्न कुनैपनि तोडफोडको आवश्यकता पर्दैन । केही वैज्ञानिक विधि अपनाएर वास्तु दोष मेटाउँदा पनि भवनभित्रको वातावरण आकर्षक मात्र होइन, वास्तुमैत्री समेत बन्न सक्छ ।
भारतका वास्तुशास्त्री खुशदिप बंशलले दिएको टिप्स अनुसार मेटल, कलर, मिरर, पिरामिड, घरका चिजवस्तुहरु, पेन्टिङ, लाइटको प्रयोग सही दिशामा हुनु आवश्यक छ । उनको भनाईमा वास्तुशास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान हो । आफ्नो कार्यालयको वास्तुदोष मेटाउन कुनैपनि तोडफोड गरिरहन पर्दैन, केही सामान्य कुरामा ध्यान दिए पुग्छ ।
जस्तो कार्यालयको पेन्टिङमा सामान्य परिवर्तन, चिजवस्तु राख्ने स्थानमा परिवर्तन, बत्ति सजावट परिवर्तन लगाएतका कुराले बास्तु दोष मेटाउन सकिन्छ ।
यस्ता छन् टिप्स
भवनको पुर्वी र पश्चिम दिशामा मात्र आफ्नो साइट कार्यालय बनाउनुहोस् ।
तपाईंले बनाउँदै गरेको प्लान्टको उत्तर र दक्षिण दिशामा झुक्किएर पनि कच्चा पदार्थ नराख्नुस् ।
सबैभन्दा पहिला प्लान्टको उत्तर दिशाबाट कन्स्ट्रक्सनको सुरुवात गर्नुहोस् ।
तपाईंको कार्यालयको दक्षिण पट्टि दौडदै गरेको १२ घोडाको मूर्ति वा चित्र राख्नुहोस् ।
कार्यालयको उत्तर वा दक्षिण क्षेत्रमा रातो हात्ती राख्दा तपाईको व्यवसाय फष्टाउने बास्तुशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
कुनैपनि विक्री सँग सम्बन्धित काम गर्नका लागि भने पूर्वमा पश्चिमतर्फ मुख फर्काएर बस्ने गर्नुहोस् ।
बजारीकरणका लागि दक्षिण वा उत्तर दिशामा बस्ने गनुहोस् ।
यी राशि हुने पुरुषले पाउँछन् सुन्दर श्रीमती ।